Home Somali News Somaliland: Doonni Shirkadda Dahabshiil Leedahay oo Dad Qaxooti ah Lagaga soo Daabulay...
Doonni ka mid ah gaadiidka badda ee shirkadda Dahabshiil, ayaa dad qaxooti ah oo ay si bilaash uga soo qaaday dalka Yemen soo gaadhsiisay dekedda Berbera ee Somaliland caawa.
Doonidan oo magaceeda la yidhaa AL-DAHAB oo shirkadda Dahabshiil gurmad tabaruc ah ugu fidisay dadka ku tabaalaysan colaadda ka socota waddanka Yemen, ayaa dufcaddii u horreysay ee qaxoonti tiradiisu dhan 280 qof oo isugu jira tiro kooban reer Somaliland iyo Yemeni ah iyo tirada ugu badan oo u dhalatay Soomaaliya ka soo dejisay dekedda Berbera caawa fiidkii.
Dadkan qaxoontiga ah ee doonidda Dahabshiil sida bilaashka ah u soo qaaday oo u badan dumar, carruur iyo dad waawayn, waxa dekedda lagu siiyey cunto bisil iyo cabbitaanno shirkaddu u sii diyaarisay, halka dhawr qof oo jilicsan lagu qaaday baabuurta gurmadka caafimaadka oo daawayn loo dhigay cusbitaalka magaalada Berbera.
Maareeye-ku-xigeenka Dahabshiil Cabdi Faarax Axmed oo hoggaaminayey saraakiil shirkadda ka tirsan oo dekedda ku qaabilay qaxoontigaasi, ayaa sheegay inay shirkad ahaan ku faraxsan yihiin inay u gurmadaan dadkaasi jilicsan ee qaxootiga ah oo ay sii wadi doonaan tabaruca ay ku soo qaadi doonaan.
[quote]“Doonidan oo ka mid ah gaadiidka badda ee shirkadda Dahabshiil waxay dadkan qaxootiga ah ka soo qaaday dalka Yemen, kuwaas oo aannu si bilaash ah u soo qaadnay waxay shirkaddu u sii diyaarisay wixii ay raashin ay cuni lahaayeen markay soo degeen, dadkani waxay u badan yihiin maati jilicsan oo dumar iyo carruur ah. Markaa doontani waxay noqon doontaa mid mar walba si bilaash ah u soo qaada dadka qaxootiga ah oo markii u horreysay noqonmayso. Meelaha kale ee qaxootiga Yemen ka soo degaan ee aannu xafiisyada ku leenahayna sidaa si le’eg ayaa loo qaabilay,” ayuu yidhi Mr. Cabdi Faarax.[/quote]
Somaliland: Puntland Forces illegal incursion results to the Death of Somaliland Fisherman-Minister
Somaliland: “Muuse Biixi Waa Qof aan DNA-giisa (Hidde Sidihiisa] Garanayo WAxaanan u arkaa inuu Yahay Ninka Marxaladdan ka saari dalka”
Somalia: 50 qof oo Somali iyo Itoobiyaan ah oo laga cabsi qabo in ay ku geeryoodeen badda u dhaxeysa Yemen iyo Somalia
Deg Deg: Pro Samatar Oo Farrin Culus U Diray Madaxweyne Gaas + Ciidamada Jiide Hore Oo U Af Qalaad Ugu Khubadeeyey Maxa Kala Qabsaday Ciidanka + Muuqaal